कर्णाली नदीमा पानीको सतह खतरा तह नाघ्यो, राति ९ बजेपछि बाढी केही घट्दो क्रममा – Merokhushi
मेरो खुसी । २ कार्तिक, २०७८ मंगलवार २२:०६ मा प्रकाशित
लक्ष्मण ढुंगाना । राजापुुर
मानबहादुर ठकुल्ला । कैलाली
कर्णाली नदीमा पानीको सतह खतरा तहभन्दा धेरै भएर बाढीको पानी गाउँभित्र पसेर बर्दिया र कैलालीका धेरै बस्ती डुबानमा परेका छन् ।
कैलालीको चिसापानीस्थित जल मापन केन्द्रकी गेज रिडर पार्वती गुरुङका अनुसार मंगलबार राति ९ बजेसम्म कर्णाली नदीमा पानीको बहाव १३.०५ मिटर पुगेको थियो । जबकी राति ८ बजे १३.१० मिटरसम्म पुगेको थियो । कर्णाली नदीमा पानीको बहाव १०.८० मिटर पुगेपछि खतरा मानिन्छ । नदीमा बाढी खतराको तहभन्दा बढी भएर बर्दिया र कैलालीमा तटबन्ध फुटेर बाढीको पानी बस्तीमा पुगेको हो । कर्णाली नदीको तटबन्ध गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ बनकट्टीमा फुटेर राजापुर नगरपालिकाको दौलतपुर, चनौरा, सोनाहागाउँ, सोनपुरलगायतमा बाढी गाउँ पसेको छ । त्यहाँका अधिकांश घरभित्र घुँडाभन्दा माथि पानी पसेको छ । दौलतपुर र चनौरा जोड्ने भदाली नालामा कर्णाली नदीको पानी उल्टो बगेको छ ।
बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढेर बाढीको जोखिम भएकाले नदी तटीय क्षेत्रका सनकट्टी, टीहुनी, दौलतपुर, तिघ्रा, राजापुरलगायतका स्थानमा जोखिम बढेको र सतकर्ता अपनाउन स्थानीयलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी लगातार वर्षा कारण कर्णाली नदीमा आएको बाढीले टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ५ शाहीपुरस्थित कर्णाली नदीको तटबन्ध भत्काएर नदी गाउँ पसेको छ । तटबन्ध भत्किए पछि टीकापुर नगरपालिका वडा न ५ स्थित शाहीपुर, सिम्रेनी लगायतका गाउँ डुबानमा परेका छन । डुबानमा वरेका करिब १०० घरपरिवारलाई नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको उद्दार टोलीले त्रिभुवन मावि बसन्तामा सारेको छ । यता टीकापुर नगरपालिकाकै वडा नं. ८ स्थित बनगाउ, पुदालटोल गरि करिव ८० घर डुबानमा परेका छन । उनिहरु अहिले हुलाकी सडकमा र बनगाउस्थित सुरक्षित भवनमा बसेको टीकापुर नगरपालिका वडा न ८ बनगाउका बुदिराम चौधरिले जानकारी दिएका छन् ।
त्यसै गरी शाहीपुरमा रहेको तटबन्ध भत्किएपछि टीकापुर नगरपालिका वडा न ८ बनगाउ स्थित हुलाकी सडकबाट पानीको बहाब बग्न थालेपछि हुलाकी सडक समेत अबरुद्ध भएको टीकापुर नगरपालिका वडा न ८ का वडाअध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्लाले बताए । नदी किनारका टीकापुरका वडा नं ५,६,७, ८ र ९ का बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा बस्न नगर प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले विज्ञप्ती जारी गर्दै आग्रह गरेका छन् ।
बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा भएको डुबानका दृश्यहरु । फोटोहरु : लक्ष्मण ढुंगाना